10 kulliyadaha ugu fiican California ee cilmi nafsiga 2022
10 kulliyadaha ugu fiican California ee cilmu -nafsiga
Cilmu-nafsiga waa mid ka mid ah xirfadaha caafimaad ee ugu mushaharka badan, waxaan ka wada hadalnay kulliyadaha ugu wanaagsan California ee boostadan blog-ka loogu talagalay kuwa doonaya inay laad ka bilaabaan xirfadda berrinka. Helitaanka waxbarasho mid ka mid ah dugsiyada ugu fiican waxay kor u qaadi doontaa xirfaddaada.
Sida laga soo xigtay Ururka Cilmi -nafsiga Mareykanka, Cilmi -nafsiga, Cilmi -nafsiga wuxuu la tacaalaa barashada maskaxda iyo dabeecadda, waxaa jira aagag kala duwan oo cilmi -nafsiga ah oo ay ka mid yihiin in kasta oo aan ku koobnayn kuwa soo socda:
Cilmiga cilmi nafsiga
Cilmi -nafsiga Tirada leh
Waxaa jira kulliyado gaar ah oo ku yaal California oo dhan oo caan ku ah cilmu -nafsiga waxaanan fahamsanahay dhibka ka imaan kara xulashada xulashooyin aad u fara badan, taas oo ah sababta maqaalkan uu halkan ugu joogo inuu kugu hago fikrad wanaagsan dugsiyada kala duwan ee jira iyo midka aad waa inuu doortaa.
Tiro ka mid ah kulliyadaha ugu fiican California ee cilmu -nafsiga ayaa ka hooseeya. Waxaad dooran kartaa inaad bilowdo safarkaaga si aad u gaarto yoolkaaga waxbarasho iyo xirfadeed mid kasta oo ka mid ah jaamacadaha aad u malaynayso inay ku habboon yihiin.
1 Maxay kulliyadaha California ee cilmu -nafsiga sameeyaan?
2 Shuruudaha lagu dalbado kulliyadaha California ee Cilmi -nafsiga
3 10 Kulliyadaha ugu Fiican California ee Cilmi -nafsiga
3.1 1. Stanford University
3.2 2. University of California, Davis
3.3 3. Jaamacadda California, Santa-Barbara
3.4 4. Jaamacadda Koonfurta California
3.5 5. Jaamacadda Chapman
3.6 6. Jaamacadda California, Los Angeles
3.7 7. Jaamacadda Pepperdine
3.8 8. Jaamacadda California, San Diego
3.9 9. Jaamacadda California, Santa Cruz
3.10 10. Jaamacadda California, Irvine
Maxay kulliyadaha California ee cilmu -nafsiga sameeyaan?
Waa hagaag, sida hore loo sharraxay, cilmu -nafsiga wuxuu ka hadlayaa barashada maskaxda iyo dabeecadda aadanaha. Kaliya haddii aad la yaabban tahay kulliyadaha California ee cilmu -nafsiga Halkan waa sheeko:
Waxay baranayaan dabeecadaha aadanaha sida ay u baranayaan hababka maskaxda oo ay ku jiraan maskaxda, maskaxda, iyo isdhexgalka bulshada ee aadanaha. Barashada cilmu -nafsiga ee kulliyadda California waxay kuu diyaarineysaa inaad ka shaqeyso cilmu -nafsiga si aad u dhisto riyooyin dhab ah. Kulliyadaha California ee cilmu -nafsiga waxay baraan xirfado qiimo leh oo ka dhigaya ardayga inuu ka shaqaysiiyo qaybaha kala duwan ee nolosha.
Shuruudaha lagu dalbado kulliyadaha California ee Cilmi -nafsiga
Waxaa jira shuruudo kala duwan oo lagu galo kulliyadda California ee cilmu -nafsiga ee dugsiyada kala duwan. Shahaadada jaamacadeed, aad bay uga duwan tahay, si la mid ah waxay uga duwan tahay shahaadada qalin -jabinta.
Si aad ugu sii wadato shahaadada heerka koowaad ee cilmu -nafsiga, waxaa laga yaabaa inaysan jirin maadooyin gaar ah oo loo baahan yahay laakiin Bayoolajiga ama Sayniska Nolosha ayaa dhinac siin doona ardayga sababta oo ah sida cilmu -nafsiga uu diiradda u saaro maskaxda aadanaha iyo xubnaha dareenka. Waxaa muhiim ah inaad ogaato sidoo kale inaad haysato dhibcaha dhibcaha gelitaanka sare (APS) waxay ku siinaysaa faa'iido dheeraad ah codsadayaasha kale ee leh dhibcaha ka hooseeya kuwaaga.
Shuruudaha Cilmi -nafsiga ee dugsiyada kala duwan waa sida soo socota:
Isku -darka Isugeynta Jaamacadeed ee GPA ee 3.0. Mudnaanta hoose waxaa la siiyaa codsadayaasha haysta GPA -yada ka hooseeya 3.0.
Shahaadada shahaadada hoose ee cilmi-nafsiga
Tirakoobka cilmi nafsiga iyo hababka koorsada ayaa sidoo kale loo baahan yahay.
Xaaladaha qaarkood, dhibcaha Guud iyo qoran ee GRE ayaa loo baahan yahay.
10 Kulliyadaha ugu Fiican California ee Cilmi -nafsiga
Jaamacadda California, Santa-Barbara
Jaamacadda California, Los Angeles
Jaamacadda California Santa Cruz
Jaamacadda California, Irvine
Mid ka mid ah kulliyadaha ugu fiican California ee cilmu -nafsiga. Iskuulku wuxuu bixiyaa 3, barnaamijyada cilmi -nafsiga ee Shahaadada Guud.
Jaamacadda Stanford waxaa la aasaasay 1885. Waa jaamacad cilmi baaris oo gaar loo leeyahay oo ku taal aagga metro San Francisco, oo ka kooban saddex iskuul oo ku baahsan in ka badan 40 barnaamijyo shahaadada koowaad ee jaamacadda ah iyo barnaamijyo shahaado sare oo shahaado ah oo ay ku jiraan daw, sharci, iyo ganacsi.
Markii hore waxaa lagu yaqaanay qaab dhismeedkeeda qaab-dhismeed laakiin waxaa dib loo dhisay wixii ka dambeeyay dhulgariirkii San Francisco 1906dii. Sidoo kale loo yaqaan xafiiltanka UC Berkeley marka lagu daro caadooyinkeeda waxbarasho ee xooggan.
Waa mid ka mid ah hay'adaha cilmi -baarista ee aadka loo tixgeliyo waxayna soo saartay aqoonyahanno badan oo Fulbright iyo Rhodes ah. Waxay ku jirtaa jadwalka tacliimeed ee ku salaysan rubuc.
Waxbarashada Stanford waxay ka badan tahay $ 50,000 sanadkii. Jaamacadda Stanford waxay leedahay saamiga ardayga-macalinka ee 11: 1 iyo guud ahaan ardayga 17,249 ama ka badan.
Jaamacadda California waxaa la aasaasay 1950, waxay u shaqeyneysay oo kaliya iskuulka ugu weyn ee beeraha ee nidaamka UC, konton sano ka hor.
Dugsigu wuxuu leeyahay in ka badan 35,000 oo iska diiwaangeliya shahaadada koowaad ee jaamacadda illaa 2021. Wuxuu bixiyaa 3 barnaamijyo cilmi -nafsi guud ah.
Jaamacaddu waa mid aad u ballaaran, jaamacad afar sano ah oo dadweyne oo ku taal Galbeedka Sacramento, oo ah magaalo ku taal Davis.
Jaamacadda California, Davis waxay bixisaa in ka badan 80 barnaamijyo qalin -jabinta ah iyada oo loo marayo waaxyo caalami ahaan la aqoonsan yahay sida Betty Irene Moore School of Nursing iyo UC Davis School of Medicine.
Taariikhda cilmi -nafsiga ee kulliyadda waa mid sumcad leh. 32 arday ayaa qalin jabisay 2019, 19 waxay kasbadeen shahaadada Masters, 13 waxay heleen shahaadada dhakhtarnimada
UC Davis waxaa si weyn loogu yaqaan Ivy dadweyne, laga yaabee inay ka dhalatay cilmi -baaris dhammaystiran oo ka dhacda xerada iyo tas -hiilaadka maxalliga ah sida Xarunta Raptor California, Crocker Nuclear Laboratory, Bodega Marine Reserve.
Jaamacadda California, Davis waxay leedahay saamiga ardayga-macalinka ee 22: 1 iyo guud ahaan ardayda 36,634 ama wixii ka dambeeya. Waxay si fudud u tahay mid ka mid ah kulliyadaha ugu fiican California ee cilmu -nafsiga.
3. Jaamacadda California, Santa-Barbara
Jaamacadda California waxay bixisaa 3 barnaamij oo ah Darajooyinka Guud ee Kaaliforniya. Waa jaamacad dadweyne oo afar sano ah oo ku taal xaafad dhexdhexaad ah.
Xiriirka ardayga iyo macallinka ee Jaamacadda waa 24: 1 waxayna leedahay guud ahaan arday lagu qiyaasay 26,314.
Jaamacaddu waxay aqoonsi ka haysataa Cilmi -nafsiga Caafimaadka, Cilmi -nafsiga La -talinta, Cilmi -nafsiga Xirfadeed, Cilmi -nafsiga Xirfadeed/Sayniska, Cilmu -nafsiga Dugsiga, iyo dhowr koorsooyin oo kale oo ka socda hay'ado aqoonsi oo kala duwan oo ku yaal Ameerika iyo xitaa adduunka.
Galitaanka Jaamacadda California, Santa-Barbara waa mid caadi ah. Dugsigu wuxuu bixiyaa barnaamijyo tacliimeed oo caalamku aqoonsan yahay oo leh jawi iskaashi iyo firfircooni leh.
Waxbarashada Jaamacadda California, Santa Barbara waa mid aad u xiiso badan maxaa yeelay waxay la macno tahay inaad ka hesho waxbarasho tayo leh mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan dhulka.
Waa bilow aad u wanaagsan in laga dhabeeyo riyada nolosha qofka oo dib loo milicsado sidii hore loogu sii wadi lahaa xirfadda la doortay. Waa mid ka mid ah kulliyadaha ugu fiican California ee cilmu -nafsiga.
4. Jaamacadda Koonfurta California
Jaamacadu waa machad cilmi baaris oo gaar loo leeyahay oo la aasaasay sanadkii 1880kii Robert Widney.
Jaamacadda ayaa si fudud u ah mid ka mid ah kulliyadaha ugu fiican California ee cilmu -nafsiga. Waxay leedahay hab gelitaan aad u xulasho leh. Waxay bixisaa 2 barnaamijyo shahaado guud ah oo cilmi -nafsi ah. Waxay ka kooban tahay in ka badan labaatan dugsi oo shahaadada koowaad ah sida Kuliyadda Waraaqaha, Fanka, iyo Sayniska ee Dornsife.
Jaamacadda Koonfurta Kaliforniya waxay ku taal aag magaalo galbeed ka xigta Downtown Los, Angeles. Waxay ka qalin jabisay arday aad u badan cilmu -nafsiga sanado badan.
Sanadkii 2019, waxay ka qalin jabisay 170 arday guud oo cilmi -nafsiyeed, 157 oo ah shahaadada Bachelor -ka iyo 13 -ka shahaadada Master -ka, tan iyo markaasna waxay horseed u ahayd raadinta cilmu -nafsiga ee California iyo meel ka fog.
Jaamacaddu waxay leedahay saamiga ardayga-macalinka ee 22: 1 iyo guud ahaan ardayda 48,321 ama ka badan. Waxaa caalami ahaan loo aqoonsan yahay barashada iyo cilmi -baarista. Waa ikhtiyaar u fiican qof kasta oo doonaya inuu ku barto cilmu -nafsiga ee California maxaa yeelay waa mid ka mid ah kulliyadaha ugu wanaagsan California ee cilmu -nafsiga.
Jaamacadda Koonfurta California waxay leedahay shabakad weyn oo Alumni ah oo ku jirta warshadaha filimka iyo warshado aad u badan oo muhiim ah oo ku yaal Ameerika.
5. Jaamacadda Chapman
Jaamacadda Chapman waxay si fiican u qabtaa cilmu -nafsiga sannadihii la soo dhaafay waxay si joogto ah ugu qalin -jabisay ardayda aqoonta u leh cilmu -nafsiga sannad walba.
Waa mid ka mid ah kulliyadaha ugu fiican California ee cilmu -nafsiga waxayna bixisaa hal barnaamij cilmi -nafsi guud ah. Waa jaamacad gaar loo leeyahay oo aan macaash doon ahayn oo ku taal magaalo dhexdhexaad ah iyada oo iskuulka laftiisu uu yahay mid dhexdhexaad ah sidoo kale.
Jaamacadda Chapman waxay si joogto ah uga qalin jabisay ardayda cilmu -nafsiga taariikhda ilaa bilowgii Cilmu -nafsiga oo ah koorsada jaamacadda.
Sannadka 2019, 99 arday guud oo cilmi -nafsiyeed ah ayaa ka qalin -jabiyay barnaamijka shahaadada Bachelor -ka.
Saamiga ardayga iyo macalinku waa 18: 1 jaamacadduna waxay leedahay arday guud oo qiyaastii ah 9,850. Jaamacaddu waxay leedahay aqoonsiyo hay'adeed oo khaas ah oo ka socda hay'ado aqoonsi oo kala duwan.
Gargaarka maaliyadeed ee qaybaha kala duwan ee ardayda ayaa la heli karaa. Jaamacadda Chapman waxay caado ka dhigtay inay suurtogal ka dhigto ardayda ka kala socota dhammaan qaybaha nolosha inay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka waxbarashada jaamacadda ee Chapman ilaa 1861 iyada oo loo marayo barnaamijyadooda gargaarka maaliyadeed ee kala duwan.
Chapman wuxuu bixiyaa in ka badan 110 aag oo waxbarasho ah, ikhtiyaarro loo heli karo danaha iyo xiisaha kala duwan laakiin gelitaankan waxaa heli kara ardayda aqoonta sare leh. Waa mid ka mid ah kulliyadaha ugu fiican cilmu -nafsiga ee Kaaliforniya, sidaa darteed ku habboon qof kasta oo doonaya inuu ku barto cilmu -nafsiga California.
6. Jaamacadda California, Los Angeles
Tani waxay si fudud u tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn California iyo guud ahaan Ameerika. Caan ku ah UCLA, waa jaamacad weyn, dadweyne, afar sano ah oo lagu aasaasay 1919 magaalo weyn.
Jaamacadda California, Los Angeles waxay bixisaa 4 barnaamijyo cilmi -nafsi guud ah. Jaamacadda California Los Angeles waxay leedahay arday ballaaran oo qiyaastii ah 44,371 guud ahaan iyo cilmu -nafsiga, iskuulku wuxuu ka qalin -jabiyay 697 arday oo cilmi -nafsiga ah sannadka 2019, 635 wuxuu kasbaday shahaadada Bachelor -ka ee cilmu -nafsiga, iyo 19 wuxuu ku qaatay Shahaadooyinkooda Dhakhtarnimada ee cilmu -nafsiga. Waxay ku taallaa Los Angeles, California.
Saamiga ardayga iyo macalinku waa qiyaastii 21: 1. Waxay leedahay lix dugsi hoose, toddoba dugsi xirfadeed, iyo afar barnaamijyo sayniska caafimaadka ah oo lagu daray waaxda Farshaxanka iyo Farshaxanka oo lagu qiimeeyo heer qaran, dugsiga caafimaadka, iyo dugsiga caafimaadka dadweynaha.
Gelitaanka Jaamacadda California, Los Angeles waa mid tartan badan maxaa yeelay jaamacaddu waxay heshaa ku dhawaad ​​codsiyada kuleejka ugu sarreeya marka loo eego jaamacadaha kale ee adduunka.
Waxa kale oo ay leedahay sumcadda hay'ad cilmi -baaris hoggaamineed oo la aasaasay qarnigii 20 -aad. Waxay ku taal bartamaha Los Angeles halkaas oo buuqu ka socdo.
7. Jaamacadda Pepperdine
Waxay ku taallaa agagaarka weyn ee Malibu, California. Jaamacadda Pepperdine waa mid ka mid ah kulliyadaha ugu wanaagsan California ee cilmu -nafsiga.
Iskuulku wuxuu bixiyaa 3 cilmi -nafsi, barnaamijyada Darajada Guud. In kasta oo uu yahay dugsi dhexdhexaad ah oo aan macaash doon ahayn, wuxuu ku shaqeeyaa jadwal waxbarasho afar sano ah.
Pepperdine wuxuu leeyahay diiwaanka qalin -jabinta 115 ardayda guud ee cilmu -nafsiga sannadka 2019, 65 arday oo qaata shahaadada Bachelor -ka iyo 50 oo qaata shahaadada Masters -ka. Cabbirka fasalka ee Jaamacadda Pepperdine I wadar ahaan 22: 1 marka loo eego saamiga ardayga iyo macallinka, guud ahaan ardayga waxaa lagu qiyaasaa cabbirka 8,824.
Jaamacadda Pepperdine waxay leedahay taariikh la duubay oo ah diyaarinta aadka u wanaagsan ee ardayda xirfaddooda. Waxay aqoonsi ka haystaan ​​hay'ado komishan oo kala duwan oo jaamacad ah iyo aqbalaadda Pepperdine waa mid tartan badan, waxbarashadu aad bay u jaban tahay.
Laga soo bilaabo 2019, wax-ku-dhigashada jaamacadda ee jaamacadda waxay ahayd $ 55,640, waxbarashada gobolka ka baxsan waxay ahayd $ 55,640, oo la mid ah waxbarashada gobolka, buugaagtu waxay ku kacday qiyaas lagu qiyaasay $ 1250 iyo qolka xerada iyo guddigu waxay ku kaceen qiyaastii $ 15,670.
Booqo websaydhka Iskuulka halkan
8. Jaamacadda California, San Diego
Jaamacadda California, San Diego waa jaamacad dadweyne oo aad u ballaaran oo ku taal aagga La Jolla ee San Diego, California.
Waxaa la aasaasay 1960, si sahal ah waa xerada kaliya ee ku taal Mareykanka oo ku taal xeebta siineysa jawiga muuqaal u gaar ah dhinac kasta.
Waa Jaamacad afar sano ah oo si joogto ah uga qalin jabisay dhakhaatiir badan oo caan ah oo ku takhasusay ficilka maanta.
Sanadka 2019, Jaamacaddu waxay ka qalin jabisay wadar ahaan 243 arday oo ku takhasusay cilmu -nafsiga, 242 arday oo qaatay Shahaadada Bachelor -ka iyo hal arday oo qaatay Shahaadada Doctorate -ka.
Cabbirka fasalka ee Jaamacadda California, San Diego waa 28: 1 marka loo eego xiriirka ardayga iyo macallinka iyo guud ahaan ardayda ardaydu waa qiyaasta qiyaasta heerka koowaad ee 2021 oo ah 35,000.
Jaamacaddu waxay u qaybsan tahay toddoba kulliyadood oo kala duwan oo kala duwan iyo waaxyo loo habeeyay afar qaybood oo waxbarasho oo kala duwan.
Wax-barashada jaamacadda waa mid aad u wanaagsan, ardayda gobolka ku nool waxay bixiyaan qiyaastii rubuc ka mid ah waxa ay bixiyaan ardayda gobolka ka baxsan. Waxaa jira hawlo xiiso u leh ardayda maadaama ay xor u yihiin inay ku biiraan mid kasta oo ka mid ah ururada ardayda ee kala duwan ee ku habboon. Jaamacadda California, San Diego waa mid ka mid ah kulliyadaha ugu wanaagsan California ee cilmu -nafsiga.
9. Jaamacadda California, Santa Cruz
Wax -ku -oolnimada iyo wax -ku -oolnimada wax -ku -oolnimada iyo ku -dhaqanka cilmu -nafsiga ee Jaamacadda California, Santa Cruz si fiican ayaa looga aqoonsan yahay Kaalifoorniya oo aad uga fog waxayna siinaysaa aqoonsi ahaan mid ka mid ah Kulliyadaha ugu Fiican California ee Cilmi -nafsiga.
Dugsigu wuxuu bixiyaa saddex cilmi -nafsi oo ah barnaamijyada shahaadada guud. Waa jaamacad weyn, dadweyne, afar sano ah oo ku taal magaalo yar oo si joogto ah uga qalin jabisay dhowr arday oo cilmi-nafsiga ah.
Diiwaanka ayaa muujinaya in dugsigu ka qalin jabiyay 464 arday guud oo cilmi -nafsiga ah sannadka 2019, halka wadar ahaan 443 ay ka qalin -jebiyeen cilmu -nafsiga shahaadada Bachelor -ka, siddeed arday ayaa ka qalin -jabiyay cilmu -nafsiga sayidyadooda, 13 waxay ka qalin -jebiyeen cilmu -nafsiga shahaadada Doctoral -ka.
Waxay aqoonsi ka haysataa Ururka Cilmi -nafsiga Mareykanka, Guddiga Aqoonsiga.
Waxaa jira fursado shaqo oo badan oo u furan ardayda dhigata shahaadada koowaad ee Jaamacadda California, Santa Cruz. Borofesoorayaashu waxay fiiro gaar ah siiyaan ardayda dhigata shahaadada koowaad iyo xitaa marka ay jiraan xaalado heer sare ah waxay ku xiraan xiriiro dhab ah oo kor u qaadi doona xirfaddooda.
Saamiga ardayga-macalinka ee Jaamacadda California, San Diego waa 28: 1 dugsiguna wuxuu leeyahay qiyaas arday oo dhan 19,494.
10. Jaamacadda California, Irvine
Jaamacadda California, Irvine waa mid ka mid ah kulliyadaha ugu wanaagsan California ee cilmu -nafsiga.
Waxaa la aasaasay 1964 isla markii Los Angeles ay bixiso 3 Psychology, barnaamijyada shahaadada guud.
Waa jaamacad aad u ballaaran, dadweyne, afar sano ah oo ku taal badhtamaha Irvine, California oo si joogto ah ugu fiicnayd cilmu-nafsiga iyo koorsooyin kale oo laga bixiyo jaamacadda sharafta leh.
Sanadka 2019, jaamacaddu waxay ka qalin jabisay 273 arday oo cilmi -nafsiga ah wadar ahaan waxay kasbadeen shahaadada Bachelor -ka, 2 arday ayaa qaatay shahaadada Master -ka, ka dibna 1 ayaa qaatay shahaadada Doctoral. Cabbirka fasalka ee Jaamacadda California, Irvine wuxuu leeyahay fasal dhexdhexaad ah oo ah 26: 1 saamiga ardayga-macalinka, jirka guud ee ardayda waxaa lagu qiyaasaa cabbirka 33,000 ee ardayda dhigata shahaadada koowaad ee hadda.
Jaamacadda Irvine waxay leedahay 13 kulliyadood oo ay ku jiraan Claire Trevor School of Arts oo caan ah iyo Donald Bren school of information & computer science.
Waxaa jira ururo cilmi baaris oo badan oo la heli karo, kuwaas oo ay ka mid yihiin shaybaarka Fleishman, machadka Beckham Laser, iyo Center for Cognitive Neuroscience halkaas oo ardayda iyo macalimiintu si wadajir ah uga wada shaqeeyaan kobcinta cilmi baarista iyo horumarinta jaamacadda. Jaamacaddu waxay aqoonsi ka haysataa hay'ado aqoonsi oo kala duwan.
Maxaad u baahan doontaa si aad u noqoto Dhakhtarka Cilmi -nafsiga ee California?
Hagaag, si aad tan u gaarto, waa inaad ku gudubtaa imtixaanno iyo tijaabooyin taxane ah oo ay sameeyaan guddiga sharciyeynta cilmu -nafsiga ee Kaalifoorniya ama Ameerika oo dhan.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad haysato shahaadada Doctoral ee cilmu-nafsiga oo lagu daray ilaa 3,000 saacadood oo waayo-aragnimo kormeer ah oo 1,500 ay noqon karto dhakhtar hore.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad jeceshahay mawduucyada soo socda
10 Koorsooyinka Cilmi-nafsiga ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Bilowga
Maxay Yihiin Noocyada Kaladuwan ee Cilmu-nafsiga iyo Doorkooda
Falanqaynta Habdhaqanka La Adeegsaday Vs. Cilmi-nafsiyeedka Daaweynta: Hanuunin qeexan
Sayniska Kombiyuutarka, Xisaabta, injineernimada iyo cilmu-nafsiga Shahaadada Jaamacadeed ee Kanada 2019
Previous Post:13 Dugsiyada Baahiyaha Gaarka ah ee ugu Fiican Florida
Post Next:10 Barnaamijyada Autism ee ugu Fiican Dugsiyada Dadweynaha